Al-Shabaab oo toogasho ka fulisay Hiiraan | KEYDMEDIA ONLINE
Al-Shabaab oo toogasho ka fulisay Hiiraan
Ururka Al-Shabaab ayaa labo ruux ku toogtay fagaare ku yaallo deegaanka Buq Aqable ee gobolka Hiiraan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Al-shabab ayaa fagaare ku yaallo deegaanka Buq Aqable ee gobolka Hiiraan ku toogtay labo ruux oo ay sheegeen in ay ahaayeen basaasiin u shaqeynayay sirdoonnada Somalia iyo AMISOM.
Dadweyne fara badan ayaa isugu soo baxay goobta lagu tooganayay raggaan, waxaana mid ka mid ah raggaas oo lagu magacaabo Axmed Maxamed Abiikar oo 33 sano jir ahaa lagu eedeeyay in uu basaas u ahaa ciidamada AMISOM ee ku sugan degmada Jalalaqsi ee gobolkaas.
Ninka labaad oo magaciisa lagu sheegay Cabaas Max’ed Cismaan ayaa sida Al-shabaab ay sheegtay qirtay inuu basaas u ahaa Maamulka Hirshabelle qeybta sirdoonka ee magaalada Beled Weyne waxaana lagasoo qabtay tuulada Booco ee gobolka Hiiraan.
Maxkamadda Al-Shabaab ay leedahay oo raggan ku xukuntay dilka toogashada ah, ayaa sheegtay inay qirteen inay u basaasayeen Sirdoonada Soomaaliya iyo AMISOM, inkastoo aanay raggaas helin wax qareen oo difaaca.
Al-shabaab ayaa degaanada ay ka taliso marar badan horey uga fuliyey xukuno noocan ah oo lagu duliyey dad ay ku eedeeyaan iney jawaasiis u yihiin ama la shaqeeyaan DF iyo ciidamada shisheeye ee taageeraya.
Seynab Baxsan oo Muqdisho ku geeriyootey
Warar 19 October 2020 18:32
Madaxda sare ee DF oo uu kamid yahay Farmaajo ayaa tacsi ka diay geeridda Fanaanadda Soomaaliyeed.